Dowladda oo qaadeysa dagaal uu hoggaamin doono Madaxweyne Farm... | Universal Somali TV
Dowladda oo qaadeysa dagaal uu hoggaamin doono Madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa hoggaamin doono dagaal dowladda Somaliya ay ku qaadi doonto deeganada Shabaab ay ka joogaan Gobolada dalka Somaliya.
Hadalkaan ayaa waxaa sheegay Wasiirka gaashaandhigga Xukuumadda Somaliya Maxamed Mursal C/raxmaan, wuxuuna sheegay hawlgalkaan dagaalka ah inuu ka duwan yahay kii hore.
“Abaabulka aan hadda sameynayno waa uu ka duwan yahay kii hore abaabulada hore waa ay ka hooseeyeen darajo ahaan midkaan, kan waxaa abaabulaya Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Farmaajo, waxaana ka qayb galaya ciidamo isku dhaf ah ciidanka Xoogga dalka Somaliya kaliya ma’ahan.” Ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhigga.
Hawlgalkaan ayaa wuxuu sheegay in loo qorsheeyay ciidamo marka ay qabsadaan Deegaano Shabaab ku sugnaan jireen in loo diyaariyay ciidamo kale oo cusub oo la wareegaya deegaankaasi oo amnigiisa sugaya.
“Waxaa kaloo jiri doono marka argagixisada ay abaabulaan qaraxyo ama xerooyin ciidan ay tababarayaan oo xogtaasi la helo, waxaa loo diri doonaa ciidan oo soo bur burin doono goobahaasi.” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Wasiirka gaashaandhigga Somaliya.
Kan-xigaWiil 16 sano jir ah oo iska casilay x...
Kan-horeMadaxweyne Farmaajo oo ka baaqday saf...
39,262,564 unique visits